Filipina: Mandihy ny mpikarakara mpandeha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2010 19:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, Português, বাংলা, македонски, English
Fampisehoana ny fomba fiarovana mandritra ny dia amin'ny fiaramanidina no niarahan'ireo mpiasa amina zotram-pitaterana an'habakabaka mpikarakara sidina ara-barotra ao Filipina navoaka an-tsarimihetsika tsy ela akory izay tao amin'ny YouTube.
Raha ny nambaran'ny tomponandraikitra iray ao amin'ilay zotram-pitaterana an'habakabaka, dia fomba iray ampivadiana ny asa sy ny mahafinaritra ihany ilay fampisehoana dihy mikasika ny fepetra fiarovana mandritra ny dia.
“Iny dihy iny dia fomba iray nentinay fotsiny nanehoana tety ivelany fa mba manana talenta sy kolontsaina tia manala azy koa izahay. Mihevitra ny hametraka azy iny amina sidina maromaro kokoa izahay taorian'ny nahazoanay fampirisihana avy amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka.”
Mpampiasa renivola any Philippines ny Cebu Pacific izay manana ny ampahany betsaka amin'ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka anatiny.
Fikambanana iray ivondronan'ireo mpiasa eny ambony fiaramanidina sy ny stewards, na izany aza, no taitra tamin'ny fahalianana sy ny fipariahan'ilay sarimihetsika tany amin'ny aterineto.
Na dia raisina hoe fanandratana tsy dia mahasosotra loatra hisarihana ny sain'ny daholobe aza ilay izy amin'ny fijerena azy indray mipi-maso, rehefa ho lava kosa dia toa hitondra sary ratsy ho an'ireo mpiasa eny ambony fiaramanidina ny fanosorana azy ireo ho mpanakanto /artista manaitaitra filàna ao an-tsain'ny besinimaro, izay tsy nosainin'ireo vehivavy-mpandihy-mpiasa eny ambony fiaramanidina.
Manamarika fiverenana amin'ny lasa ity kifonofono toa ampivoitra fananahana ity, nandritra ny taona 50 sy 60 tamin'ny “mpiasa eny ambony fiaramanidina” natao hanao pataloha mafana sy zipo fohy mba hisintonana ny sain'ireo mpandeha izay lehilahy manao afera no ankamaroany. Porofo ny fampandihizana azy ireo manoloana ny mpandeha fa tena latsaka ambany dia ambany izany foto-pisainana izany.
Amin'ny fotoana anoratana ity dia efa manana jery 6 866 006, fy 13 720, ary tsy tia 529 ny horonantsary nanomboka tamin'ny nampiakarana azy tamin'ny 30 Septambra. Nahazo karazana valisoa tamin'ny YouTube koa izy raha ny voalazan'ny Techpinas.
Sady nahazo fanehoan-kevitra manaiky ilay horonantsary no nahazo fanehoan-kevitra manohitra ihany koa tao amin'ny Youtube, Facebook, ary Twitter. Maro ireo nidera ity sidina amim-pandihizana ity, noho ny fampianarana fisorohan-doza lasa tsy dia mahasosotra loatra. Ireo tsy tia ilay horonantsary kosa dia manameloka ity fomba ity ho “sexiste” sy fanavakavahana lahy sy vavy. Santionany amin'ireo fanehoan-kevitra amin'ny Facebook:
Samuel Raterta tiako io. lasa mifantoka kokoa amin'ny fampianarana ireo lalàna fisorohan-doza ao amin'ny fiaramanidina ireo mpandeha. Sady tamin'ny voalohany ihany koa ry zareo no nandihy fa tsy nandritra ny sidina iray manontolo akory.
Prince Valdez aleo miaiky fa mahalafo ny fananahana…
Tine Sabillo Mahalafo ny fananahana satria mandefitra ny karazana fanandratana ny fanahanana mora vidy toa izany isika. Ary eny, maro ireo vehivavy mpiasa amin'ny fiaramanidina tsy dia tanora loatra ao amin'ny PAL. Niady ho an'ny fitoviana izy ireo. Manam-pahaizana manokana momba ny fisorohan-doza rahateo izy. Tsy karazana fifaninanana hatsaràn-tarehy na talenta ity. Handeha fiaramanidina ihany ny olona na tsy “manja” na “tsara tarehy” toa izany aza ireo vehivavy mpiasa ao, satria ilaina ny dia. Tsia ho an'ny fanavakavahana mahalahy na mahavavy sy ara-taona any am-piasàna.
Mabel Balanquit tsy hitako hoe aiza ny olana. paika mety io. mampiala voly 🙂
Rey Refran ‎”Manamarika fiverenana amin'ny lasa ity kifonofono mampirona ho amin'ny fananahana ity, nandritra ny taona 50 sy 60 tamin'ny “mpiasa eny ambony fiaramanidina” natao hanao pataloha mafana sy zipo fohy mba hisintonana ny sain'ireo mpandeha izay lehilahy mpandraharaha ny ankamaroany” < — mahita fitoviana mahasosotra amin'ny fahaterahan'ny McCarthyism tany Filipina aho eto, sa tsy izany?
Ny sary famantarana dia avy amin'ny pejy Flickr an'i georgeparrilla ampiasaina eo ambany fiarovana CC License Attribution 2.0 Generic